March 2009 | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ကိုယ်အခု စာရေးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ စိတ်ပါလို့ ရေးချင်ရေး၊ မရေးချင်နေ ကိစ္စမရှိပေမဲ့ အခုတော့ ရေးမှကို ဖြစ်တော့မယ်။ အိုးကလေး ပို့စ်ကို ထိပ်ဆုံးကြီးမှာ ရှိနေတာ အမြန်ပျောက်အောင် လုပ်မှ ဖြစ်တော့မယ်။
ဖြစ်ပုံက ကိုယ်ပြောချင်တာ ဒါ ဆိုရင် လူတွေက တခြားကိစ္စကို နားလည် သွားတတ်ကြလို့ပါ။ ကိုယ်ကပဲ စာရေးမတတ်လို့လား မသိ၊ တကယ်က ကိုယ်ရေးခဲ့တာ ရိုးရိုးပါလေ။ ကိုယ် အိုးလှလှလေးတွေ လက်ဆော့ လုပ်မိတဲ့အကြောင်း ရေးထားတာ မဟုတ်ဘူးလား။
ဒါပေမဲ့ တချို့စာဖတ်သူတွေ နားလည်သွားတာက ကိုယ်က လူဆိုးကြီး လုံးလုံး ဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ့်အမျိုးသားမှာ သနားစဖွယ် အနိုင်ကျင့်ခံလူသား ဖြစ်နေပါပြီ။ ကွန်မန့်တွေ အီးမေးလ်တွေမှာလဲ ကိုယ်က အိုးပျံ နဲ့ အင်ထရို ၀င်ပြီးသကာလ ကျောက်ခဲပျံတွေပါ လာတော့မယ် ဆိုပြီး သာသာထိုးထိုး ရေနစ်သူ ဝါးကူလို့ ထိုးကြပါတယ်။
တနေ့ကလဲ မိတ်ဆွေ တယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောရာမှာ ကိုယ့်လေသံကိုက ထောင်မှူးလေသံ ပေါက်နေတယ်ဆိုပဲ။ ကိုယ်လဲ စကားတောင် ဘယ်လိုပြောရမယ် မသိ။ နှစ်ယောက်ရှိရာမှာ တယောက်က ထောင်မှူးဆိုရင် ကျန်တယောက်က အကျဉ်းသားလေးသာ ဖြစ်တော့မပေါ့။ ကိုယ့်အမျိုးသားကလဲ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ သူ့ကို ၀ိုင်းသနားကုန်ကြပြီလို့ ပီတိသံနဲ့ ပြောလေရဲ့။
တကယ်က ကိုယ့်မှာ ခုတ်ရာတခြား ရှရာတခြားဆိုသလို အဖြစ်တွေက ကြံရဖန်များလို့ ရိုးတော့ ရိုးနေပါပြီလေ။ ကိုယ်လဲ တခါတလေတော့ တရက်တလေ တလွဲမလုပ်မိတဲ့နေ့လေး တနေ့တော့ သေသေသပ်သပ်လေး ရှိသွားဖို့ ကြိုးစားမယ် စိတ်ကူးတယ်။
ဒါနဲ့ ကိုယ် ဒီနေ့ စ ကြိုးစားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ မနက်ခင်းကတည်းက နိုးလာကတည်းက အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကြောင်မှုကိစ္စ တွေ ပြီးတော့ ရုံးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သွားလိုက်တယ်။ ရုံးမှာလဲ မမှားရ၊ မလွဲရအောင် ဂရုစိုက်နေတယ်၊ ပြောတယ်။
အင်း.. ဂရုစိုက်နေတော့လဲ ဟုတ်နေသားပဲ လို့ ဘ၀င်မြင့်ချင်သလိုလိုတောင် ဖြစ်မိတယ်။ အရင်နေ့တွေမှာလို ရုံးမှာ အခန်းထဲ ဝင်ခါနီး security code ကို နှိပ်ရတဲ့အခါ ရှေ့နဲ့ နောက် မှားနှိပ် မိတာမျိုး မဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ အဖုံးလေးဖွင့်ပြီး security key pad လေးကို နှိပ်နေကျမှာ တယောက်ယောက်က အဖုံးကို ဖွင့်ရက် ထားသွားတာကို သတိမထားမိဘဲ key pad ကို အတင်းဆွဲခွာနေတာမျိုး ဒီနေ့ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဟုတ်နေပြီ။ ဒါဆို အတော်လေးကို ဟုတ်နေပြီ။
တခါတုန်းက နေ့လည်ဖက်မှာ ဘော့စ် က ကိုယ့်ကို ဧည့်ခန်းမှာ ရောက်နေတဲ့လူကို အကဲသွားခတ်စမ်းပါ ပြောလို့ ကိုယ်က လူကဲခတ်တတ်သူကြီးလုပ်ပြီး သွားအကဲခတ်ခဲ့တာ။ ဥပဓိမကောင်းဘူး လို့ စိတ်ထဲ ထင်တာမို့ ဘော့စ် ကို လက်ခါပြလိုက်တယ်။ ဒီလူ မကောင်းဘူးပေါ့။ နောက်မှ ပြန်သိတာက ကိုယ်သွားကြည့်ခဲ့တာ ဘော့စ် ရဲ့ ညီအရင်း ခေါက်ခေါက်။ ကိုယ်က လူမှားကြည့်ခဲ့တာ။ သူကြည့်ခိုင်းတာက တခြားတယောက်။
ဒီနေ့မှာတော့ အေးဆေးပါ။ ဒီလို အကဲခတ်စရာလဲ လူမလာတော့ ကိုယ့်လုပ်ရပ်လေးတွေ မှန်နေတယ်။ အလုပ်များပေမဲ့ တလွဲမဖြစ်၊ အဆင်ပြေနေတယ် ဆိုပါတော့။ ကိုယ်တောင် တလွဲမလုပ်မိတဲ့ နေ့ အမှတ်တရလေး ဖြစ်သွားအောင် ထီတောင် ထိုးမလား စဉ်းစားနေတယ်။
ဒါနဲ့ အလုပ်ဆင်းတော့ ဆိုင်တဆိုင်မှာ စားစရာ ဝင်ဝယ်ရင်း မိတ်ဆွေ အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ ဆုံတယ်။ အဲဒီအထိ အိုကေသေးတယ်။ သူနဲ့ ဆိုင်မှာ ဟင်းစောင့်ရင်း မိန်းကလေးတွေ ထုံးစံ အစားအသောက်အကြောင်း ပြောမိတာပေါ့။ ပြောရင်း တရုတ်အစားအစာတွေအကြောင်း ရောက်သွားတော့ သူက တရုတ်ပြည်မှာ ဒေသအလိုက် အစားအသောက်တွေက ချက်ပုံ ချက်နည်း ကွဲသွားတယ် တဲ့။
ကိုယ်ကလဲ အလိုက်သင့် ဟုတ်တာပေါ့ ဆိုတာထက် ပိုမပြောဘူး။ စကားနည်းလေ အမှားနည်းလေ မဟုတ်လား။ အဲဒီမှာ သူက တခွန်းပြောလိုက်တယ်။
“ကျမ ယောက္ခမကလဲ ယူးနန်း ကပဲလေ” တဲ့..
“ဘာ!!! ညီမ ယောက္ခမ က ရူးနှမ်းနေတယ် ဟုတ်လား။ ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ .. ”
“မဟုတ်ပါဘူး။ ယူးနန်း ဆိုတာ ယူနန် ပြည်နယ်ကို ပြောတာ အမ”
“ဟယ်..အားနာလိုက်တာ ညီမရယ်၊ ဆောရီးနော်..”
ဒါနဲ့ ဟင်းရရချင်း ကမန်းကတန်း နှုတ်ဆက်၊ ကားပေါ်ပြေးတက်ခဲ့ရတယ်။ သူက ယူနန်ကို ဘိုဆန်ပြီး ယူးနန်းလို့ ပြောတာကို ဘုန်းကြီးကျောင်းအသံထွက်နဲ့ ကိုယ်က ရူးနှမ်းတယ် ထင်ပြီး သွားမေးမိတာလေ။ ဒီတခွန်းလေးပဲ လွတ်ထွက်သွားတာ..။
တော်ပြီ၊ တော်ပြီ။ ဒီနေ့လဲ တလွဲလုပ်မိပြန်ပြီ။
မတန်ခူးက လွမ်းတဲ့ အလွဲများ ဆိုပြီး Tag တော့ ကိုယ့်မလဲ ဘာရေးရမလဲ စဉ်းစားရတာပေါ့။ ကိုယ်လဲ လွဲတော့လွဲနေတာပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်က လွဲလဲ လွဲမှန်းတောင် မသိတော့ ခက်တယ်။ လွဲနေပါတယ်ဆိုမှ မှန်သားပဲ ထင်နေသလိုပေါ့လေ။
ဒါနဲ့ မတန်ခူးကို ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ရဲ့ ရေးပေးမယ်လို့ ပြောပြီးပါမှ အလွဲက ရှာမရဘူး။ ငါ ဘယ်မှာ လွဲဖူးလို့လဲ ထင်သေးတာကိုး။ ဒါနဲ့ ဒီညတော့ မရေးသေးဘူး အမရေ လို့ ပြောပြီး ကိုယ်တို့ အယ်လ်အေကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရောက်နေတဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့ ရွှေဂျမ်းကို သွားတွေ့မယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကိုယ်လဲ ဒီဘလော့ဂ်လေး လုပ်ဖြစ်မှ သူငယ်ချင်းတွေ တိုးလာလို့ ၀မ်းသာနေတာ။ ဘလော့ဂ်လုပ်မှ ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ရှိပေမဲ့ လူချင်းသာ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ခင်နေတာ၊ တွေ့ဖူး မြင်ဖူးကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အရင်ကတည်းက မသိဘဲ မရင်းနှီးဘဲ ဘလော့ဂ်မှာသိပြီးမှ အပြင်မှာ တွေ့ဖူးတာ ၃ယောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။
ပထမတယောက်က Heart Museum တဲ့။ မခင်ဦးမေက Heart Museum ရဲ့ အဖေ ဆုံးတာမို့ သတင်းသွားမေးပါအုံးလို့ ရွာဆော်ကြီး လုပ်ပြီး link ပေးသွားလို့ နာရေးသွားမေးတာ။ သူ့ဘလော့ဂ်ကို အရင်က မရောက်ဖူးဘူး။ သတင်းမေးရင်း လျှောက်ကြည့်မိတော့ တမြို့တည်းသားဖြစ်နေလို့ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ မေးမိတယ်။ သူကလဲ ရက်လည်ဆွမ်းသွတ် ဖိတ်ပါတယ် တဲ့။ ဒါနဲ့ နာရေးဆိုတော့ ရောက်အောင် သွားမယ်ဆိုပြီး သွားခဲ့တယ်။
အဲဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကို ရောက်တော့ တရားနာတော့မဲ့ အချိန်။ ဘုန်းဘုန်းက ရင်းနှီးပြီးသား၊ ကိုယ်တို့နဲ့ ဆွေနီးမျိုးစပ် ဘကြီးဘုန်းကြီး။ ကိုယ့်ကိုတွေ့တော့ အော် အလှူရှင်နဲ့ အသိတွေလား၊ ဘယ်သူနဲ့သိတာလဲ တဲ့။ လောက၀တ် ရိုးရိုး မေးတာပါ။ ကိုယ်လဲ ဘုန်းဘုန်းကို ကြောင် ကြည့်လို့။ ပါးစပ်က ဟတ် ဟတ် နဲ့ ရှေ့ဆက် မတက်ဘူး။ Heart Museum လို့ ပြောလိုက်ရမှာလား၊ သူ့နံမည်ရင်းက ဘာလဲ၊ ဘာမှကို မသိ။
ကိုယ့်ကို လိုက်ပို့ပေးတဲ့ ကိုယ့်အမျိုးသားကလဲ ကိုယ့်အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး ရိုးနေပုံပါပဲ။ ခပ်အေးအေးပဲ နေတယ်။ ကိုယ်တို့ပုံက အလှူရှင်ကို သိသလိုလိုလုပ်ပြီး လာစားတဲ့ သူတွေနဲ့ တူနေပါပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ လူငယ်တယောက်က ထ လာပြီး အမ ကျနော်ပါ တဲ့။ အေး၊ ၀မ်းသာလိုက်တာဟယ်၊ အမလဲ လူမသိလို့ ဒုက္ခရောက်နေတာ တဲ့။ နာရေးကို လာမေးတဲ့သူက တွေ့တွေ့ချင်း ၀မ်းသာလိုက်တာဟယ် ပြောရတာတော့ သိပ်မဟုတ်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့လဲ မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ နောက် မိတ်ဆက်ကြတော့ သူက မန္တလေး ဘူမိကတဲ့။ ဘူမိကဆိုတော့ ခင်မိပြီပေါ့။
နောက်တယောက်ကတော့ အကိုကြီး ကိုအောင်သာငယ်ပေါ့။ အကို့ကိုတော့ အိမ်မှာ မိတ်ဆုံပွဲလေးလုပ်တော့ လာတက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူ လိုက်လာလို့ တွေ့ရတာပါ။ အကိုကလဲ တခြား State က ပြောင်းလာခါစ။ ကိုယ်က မီးဖိုထဲမှာ အမြည်းစိန် လုပ်နေတုန်း လာနှုတ်ဆက်တာ။ အကိုကလဲ ဘူမိဗေဒနဲ့ပဲ ကျောင်းပြီးတယ်ဆိုတော့ တခါတည်း အကိုအရင်းလို ခင်သွားတယ်။ (အကိုက အဲဒီအကြောင်းကို သူ့ဘလော့ဂ်မှာ ရေးဖူးပါတယ်)
အခုတယောက်ကတော့ ရွှေဂျမ်းလေ။ ရုံးဆင်းတာနဲ့ ဂျမ်းပေးထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်တော့ ဂျမ်းက ၀မ်းသာလိုက်တာ အမရေ တဲ့၊ အခုပဲ အစည်းအဝေးပြီးလို့ ဟိုတယ်နားက Outlet Mall ကို သွားကြည့်မလို့ လမ်းလျှောက်နေတယ် တဲ့။ ညကျရင် အဒေါ်က ထမင်းလိုက်ကျွေးမှာမို့ သွားစားပြီး တွေ့ကြတာပေါ့။ ဒီဖုန်းကိုပဲ ဆက်နော် တဲ့။ ဒါနဲ့ ကိုယ်ကလဲ ညကျရင် အမ လာတွေ့မယ်ဆိုပြီး စကားလေးဘာလေး ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်တယ်။
ညရောက်တော့ သွားကြရော ဆိုပါတော့။ ဂျမ်းလာတဲ့ မြို့ကလေးက ကိုယ်တို့နေရာနဲ့ နည်းနည်း ဝေးတယ်။ မိုင် ၃၀လောက် ထင်ပါရဲ့။ အိမ်က စ ထွက်ကတည်းက ဖုန်းဆက်တာ ဂျမ်းက မကြားလို့ ဖုန်းမကိုင်ဘူး။ ကိုယ်ကလဲ နောက်တခါခေါ်ရင် ကိုင်မှာပါလေ ဆိုပြီး စိတ်မပူဘူး။ လာမယ်လို့ ညနေက ပြောထားပြီးသားပဲလေ။ ကားထဲမှာ သီချင်းလေးဆိုရင်း သွားတယ်။
တော်တော်ကြာ မောင်းမိတော့ ကိုယ့်အမျိုးသားက ပြောတယ်၊ ရောက်ခါနီးပြီ ဖုန်းထပ်ဆက်ကြည့်ပါအုံး တဲ့။ ဒါနဲ့ ကိုယ်က ဖုန်းဆက်တယ်။ မကိုင်ဘူး။ ထပ်ဆက်တယ်။ မကိုင်သေးဘူး။ ထပ်ဆက်တယ်။ မကိုင်ပြန်ဘူး။ အဲဒါမှ ဂွ ပဲ။
ကိုယ်သိတာက သူတည်းတာ Marriott Hotel ဆိုတာကိုပါ။ ကိုယ်လဲ လွယ်လွယ်ပဲ နီးတော့မှ ဘယ် Marriott လဲ လှမ်းမေးမယ်ပေါ့၊ ကြံထားတာ။ အခု သူဖုန်းမကိုင်တော့ ခေါင်းကြီးပြီ။ တမြို့လုံး ဟိုနားမှာလဲ Marriott ဒီနားမှာလဲ Marriott ကိုး။ ဖရီးဝေးကြီးပေါ်မှာ ကားကလဲ ဆက်မောင်းနေတယ်၊ ဦးတည်ရာမဲ့ ပေါ့။
နောက်တော့ ကိုယ်လဲ ငယ်ငယ်က ဦးစံရှားဖတ်ခဲ့တဲ့ အရှိန်နဲ့ ဖျစ်ညှစ် စဉ်းစားလိုက်တာ ညနေက ဂျမ်း Mall ကြီးဆီ လမ်းလျှောက်သွားနေတယ် ဆိုတာကိုး။ ဒါနဲ့ အဲဒီ Mall ကို သွားပေတော့လို့ ဆရာကြီး လုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ Mall နဲ့ လမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့ အကွာအဝေးလောက်မှာ ရှိတဲ့ Marriott ဖြစ်ရမယ်လို့ အတပ်ဟော လိုက်တယ်။ Mall နေရာကတော့ ကိုယ်အပိုင်သိတာကိုး။
Mall ကြီးကို ပတ်ပြီး ဟိုတယ်ကို ရှာကြတာ နောက်ဆုံးတော့ တွေ့ပြီလေ။ ဒါပေမဲ့ သူ ဒီမှာ တည်းမတည်း သေချာသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဂျမ်းကိုလဲ အပြင်မှာ မမြင်ဖူးတော့ ဘယ်လို လိုက်ရှာရမလဲ မသိဘူး။ ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့လဲ မကိုင်သေးဘူး။ ဒါနဲ့ ဟိုတယ်ရှေ့မှာ ညကြီးမင်းကြီး ယောင်လည်လည်နဲ့ လမ်းလျှောက်နေတယ်။ သူ သူ့အဒေါ်နဲ့ ထမင်းသွားစားနေလို့ ဆိုင်ထဲမှာ ဆူနေတော့ မကြားတာထင်တယ်လို့ တွေးနေတယ်။
ကိုယ့်အမျိုးသားက မေးတယ်။ နံမည် သိသလား တဲ့။ ဂျမ်းလေ..ရွှေဂျမ်းလေ။ အဲဒါ နံမည်ရင်းလား တဲ့။ မသိဘူးလေ။ သူက နံမည် သိရင် Hotel Reception ကို သွားမေးမလို့ပါ။ နောက်တော့ သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချတယ်။ ကဲ ဒီလောက်ထိ လာပြီးမှတော့ ဖုန်းသာရအောင် ဆက်ပေတော့ တဲ့။
နောက်တော့ ဂျမ်းက ဖုန်းဆက်လာတယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ ဆိုင်ထဲမှာဆိုတော့ ဖုန်းသံကို မကြားဘူး။ missed calls ၁၀ခုလောက်တွေ့တော့ လန့်သွားတာ တဲ့။ ဒါနဲ့ ဆုံခဲ့ကြတယ် ဆိုပါတော့။ တွေ့ကြတော့လဲ ပြောလိုက်ကြ၊ ရီလိုက်ကြနဲ့။ ဘလော့ဂ်က သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်း ပြောကြတာပါပဲ။ ချက်ချင်းပဲ ခင်သွားလိုက်တာ။ ည ၁၀နာရီကျော်မှ ပြန်ခဲ့တယ်။
ပြန်လာတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ခဲ့ရပြီဆိုတော့ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့။ တလွဲလုပ်ခဲ့တာတွေလဲ မေ့သွားပြီ။
တလောကတော့ ကိုယ်တို့ မင်္ဂလာ ၁၃နှစ်ပြည့် အကြောင်း ပို့စ်လေး တပုဒ် ရေးမိတယ်။ အဲဒီပို့စ် တင်လိုက်တာနဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆီက ဖုန်းတွေ လာပါတယ်။ နှုတ်ဆက်ကြ ဘာညာပေါ့။
Santa Rosa မှာနေတဲ့ အကိုလို ခင်ရတဲ့ အကိုကြီးတယောက်ကတော့ ကိုယ့်အမျိုးသားဆီ ဆက်လာတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ကုန်ပြီ တဲ့။ မင်းကတော့ ၁၃ နှစ် တဲ့။ ဒီတသက် လွတ်မဲ့ပုံ မမြင် တဲ့။ ငါတို့ ဘန်ကီမွန် ကို ပြောပေးရအုံးမလား ဆိုပဲ။ ကိုယ့်ကို သူက ပြန်ပြောပြတာပါ။
အဲဒါ သူ့ တသက်စာ အလွဲပဲ ဆိုပါတော့လေ…